Sida Aad Ku Buuxin Karto Meelaha Ka Banaan Dareenkaaga - Daryeel Magazine
Sida Aad Ku Buuxin Karto Meelaha Ka Banaan Dareenkaaga
In aad joojiso in aad bixisid jacayl ka badan intaad halaysid:
– Waa in aanad noqonin ta kali ah ee rabta in uu xidhiidhku sii socdo!
– Waa in aadan kaligaa doonta wadin, ahaanina takali ah ee wax bixisa.
– Waa in aadan jeclaanin isaga in kabadan intuu ku jecelyahay: Tusaale hadaad wada hadlaysaan waa in aanad ahaanin takali ah ee horwada. Ta markasta ku fakarta waxaad isla samayn lahaydeen ee farxad ah sida in aad isla aadaan dalxiis, in aad howdka isku raacdaan ama picnic isla sameysaan iwm.
-Waa in aad isweydiisaa, miyaan ka helay ninkeyga intaad isweydiin lahayd bas in uu ninkaagu kaa helay. Haddii uusan jeceylku iyo wadashaqeyntu isku dheeli tirneyn, wax soconaya xidhiidhkaas ma jiraan. Ha is ilawsiinin dhibaatada jirta, adoo isku ilawsiinaya tusaale ahaan aad buu ushaqeeyaa, wax buu bartaa iwm, ee waa in uu ku dareemaa in aad u baahantahay saas daraadeedna kaa dalbado cudur daar. Markasta waa in aad boogta xidhiidhkiina soo gaadha udhaydaan si wadajir ah ee aadan kaligaa dhayin.
Ma aha in aad adiga kaligaa go aanka gaadhaa. Ma aha in aad adiga kaligaa ka fakartid daymaha am bill la idinku leeyahay, barbaarinta caruurtiina, ee labadiiney idinka dhaxeysaa arintaasi, saas daraadeed waa in aad kawada fakartaan maxay iyo sidee ?
Ma aha kaligaa in aad gaadhka ka haysid, dhibaatooyinka ku soo kordha xidhiidhkiina iyo in aad kawada hadashaan, ee waa in wixii yar ee xidhiidhkiina iska badala isla ilaalisaan oo marba midkiin iskugu yeedho kulan dagdag ah .
Waa in aad markasta ku fakarto wuxuu ninkaagu u qabanayo naftaada oo aan lamid ahayn ama ahayn wuxuu u qabanayo caruurtiisa.
-Ma aha in aad kaligaa tusisid ninkaaga in aad tahay qof aan laga maarmi karin, laakiin waa in uu isaguna ku tusiyaa in uu yahay qof aan laga maarmi karin.
-Waa in aad usheegtaa sidaad dareemeysid tusaale in aad dareemaysid cabsi markuusan kula joogin. In aad usheegtid, in aad dareemeysid in uu baryahan dambe xumaaday sababtoo ah kuma tuso mashaacirtiisa. Siiba usheeg habka aad rabtid in uu mashaacirtiisa kuugu sheego.daryeelmagazine.com ayaa ku leh Waxaad ogaataa in uu qofka ninka ahi ku adagtahay in uu isticmaalo labbada qaybood ee maskaxdiisa ah sidaadoo kale! Ninka qaybtiisa midigta ah wuxuu u isticmaalaa lafagurida ama baadhitaanka, saas daraadeed way ku adagtahay in uu durbadiiba u badalo maskaxdiisa qabybta bidixda oo ah qaybta dareenka
Sida Ugu Fiican Ee Aad Ku Garan Karto In Ilmahaaga Uu Hayo Madax Xanuunka Dhan-Jafka Ah Calaamadaha Aad Ku Garan Karto Saaxiibtinimada Waarta 5 Tallaabo Oo Aad Kusoo Jiidan Karto Qofka Aad Jeceshahay 4 Talaabo Oo Aad Ku Horumarin Karto Xirfadaada